INDIA: Dal Hub Lagu Ilaaliyo Tamaandhada (Yaanyada) Iyo Sababta Keentay – HormoodNews
INDIA: Dal Hub Lagu Ilaaliyo Tamaandhada (Yaanyada) Iyo Sababta Keentay
07/26/2017 1:05 am by Cabdiqaadir Carab Views: 14
India (HMN) – Dalka Hindiya waxaa sare u kacay qiimaha lagu kala iibsado Tamaandho-Xabuubta ama yaanyada, waxaana dhacday tuuginimo baahsan oo lagu hayo Tamaandhada, sidaasi darteedna dadka ka ganacsada waxa ay hadda bilaabeen in ay soo kireystaan Ilaalo hubeysan.
Sida uu qorey wargeyska Hintustan Times ee dalkaasi kasoo baxa, ganacsatada jumlada u iibiya qudaarta ee suuqa weyn ee magaalada Indore, gobolka Madhya Pradesh ay keensadeen illaalo hubeysan kadib markii kooxo tuugo ah ay boobeen kartoono Tamaadho ah. Halista waxa ay badan tahay marka baabuurta xamuulka laga dajinayo yaanyada sida ay sheegeen maamulayaasha suuqa weyn ee Devi Ahilya Bai Holker.
Gobolka Madhya Pradesh waxaa sanadkani soo maray xili-beereed wanaagsan, waxaana u soo go’day tamaandho ama yaanyo badan taasi oo keentey in beeralayda qaar ay dariiqyada ku daadiyaan yaanyada bil ka hor.
Balse, hadda xiligii ay baxaysay lama joogo, waxaana uga sii daray roobab daadad wata oo harqiyey dalaggii beeraha, sidaasi darteedna waxaa aad sare ugu kacay qiimaha yaanyada illaa iyo 100 rupees ($1.55) halkii kiilo.
Qiimahan sare u kacay waxa uu aad ugu daranyahay dadka fuqarada ah, kuwaasi oo cabasho badan ka qaba.
Mid ka mid ah dadka wax taxliiliya ayaa sheegay in basasha ay horey u ahayd mid ridda dowladda, balse hadda yaanyada ay noqon karto mid walwal badan ku abuurta siyaasiyiinta.